I-Wanda Apartment iyindawo yokuhlala ethokomele futhi encane, igumbi elilodwa lokulala kanye negumbi lombhede omkhulu, indlu ihlanzekile futhi icocekile, iyisinqumo sakho esingcono kakhulu sokungcebeleka nokuphumula! - I-Airbnb
I-Wanda Apartment iyindawo yokuhlala ethokomele futhi encane, igumbi elilodwa lokulala kanye negumbi lombhede omkhulu, indlu ihlanzekile futhi icocekile, iyisinqumo sakho esingcono kakhulu sokungcebeleka nokuphumula!
Yingkou, Liaoning, i-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-松
Indlu itholakala maphakathi ne-Yingkou, enezokuthutha ezilula, kanti i-Wanda Plaza iphansi, ekulungele kakhulu ukuthenga nokuthenga.
Izinto zokuhamba zifanelekile futhi indawo yendawo iphakeme. Kukhona i-Wanda Shopping Plaza ezansi, kanye ne-Dashang New Mart, i-Fortune Shopping Plaza, kanye nomgwaqo wokuhweba ongaphansi komhlaba e-Zhongtian Spring akukude. Inketho engcono kakhulu yokuphumula nokuphumula.
Maphakathi ne-Yingkou, kukhona i-Wanda Shopping Plaza ezansi, i-Dashang New Mart Shopping Center, i-Fortune Shopping Plaza, kanye nomgwaqo ongaphansi komhlaba wezohwebo e-Zhongtian Spring akukude. Kulungele ukuhamba.
Ungathintana nami noma kunini, ngocingo, noma kunjalo, ngiyajabula ukuxhumana nawe
Hlola ezinye izinketho ezise- Yingkou namaphethelo